HomeWararka Ciyaaraha MaantaDani Ceballos oo qarka u saaran inuu ku laabto Real Madrid xagaagan
Dani Ceballos ayaa la filayaa inuu ku soo laabto Real Madrid dhamaadka amaahdiisa haatan ee Arsenal .
Ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Spain ayaa labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeysay ku qaatay garoonka Emirates Stadium, wuxuuna saf ugu jiraa inuu safto kulankiisii ​​50-aad ee Premier League, kulanka usbuuca soo socda ka dhacaya Crystal Palace
Ceballos, oo 24 jir ah, ayaa helay fursado kooxda koowaad ah oo ku xaddidan Real Madrid ka hor inta uusan ku biirin Gunners 2019 amaah hal xilli ciyaareed ah – oo ah tallaabo markii dambe lagu soo qaatay ololaha haatan socda.
Waxaa casaan la siiyay lugtii hore ee Arsenal ee semi-finalka Europa League ee Villarreal, waxaana uu ahaa bedel aan la isticmaalin kulankii ay Arbacadii 1-0 kaga badiyeen Chelsea Premier League madaama Thomas Partey iyo Mohamed Elneny laga doorbiday khadka dhexe.
Laakiin wakaalada wararka PA ayaa fahansan in Ceballos uusan sii joogi doonin Arsenal xagaaga wixii ka dambeeya iyadoo amaah seddexaad ama heshiis joogto ah aysan u badneyn.
Tababaraha Gunners Mikel Arteta iyo shaqaalaha farsamada ee Arsenal ayaa u baahan doona inay caqli ku yeeshaan suuqa kala iibsiga iyadoo kooxda aan la fileynin inay ku faanto ciyaartoy cusub iyadoo aan dib looga soo ceshan doonin lacagtii iibka.
Taasi waxay la micno tahay u dhaqaaqista Ceballos aysan kooxda u badneyn halka Madrid ay dareensan tahay inay ku dalban karto lacag ka badan Ceballos haddii ay ka helaan iibsade LaLiga.